Global Voices teny Malagasy » Kambodza: Iza no nanome baiko amin’ny fanakanana ireo vohikala mpanohitra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2011 19:11 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Politika, Teknolojia
Ny volana lasa teo, nisy vohikala iray manohitra ny fitondrana voasakan ‘ireo Mandrindra ny raharahan'ny Aterineto (ISPs) any Kambodza. Nandà nireo ISPs taty aoriana fa hoe nahazo baiko avy any amin'ny governemanta izy ireo hanakana ireo vohikala maro ity. Nanitrikitrika ihany koa ny governemanta fa tsy politika ny fanidiana ny vohikalan'ireo vondrona mpanohitra. Soa ihany, niverina teo no eo ny fahafahana miditra amin'ilay vohikala.
Kanefa ny olana amin'ny faanivanana vohikala any Kambodza dia mbola mitohy manerika tamin'ity volana ity satria dia namoaka taratasy iray avy any amin'ireo manam-pahefan'ny fampahalalam-baovaon'ny governemanta ireo vondron'ny media, izay nangataka ireo ISPs mba ny anivana ireo vohikala  izay manimba ny fisainana sy fomban-drazana Kambodziana.
Sieng Sithy, Talen'ny mpisolo vavan'ny Fanatsarana ny politikan'ny Fifaneraserana any amin'ny MPTC, nanoratra mailaka ho an'i Ezecom, Metfone, Citylink, Digi, AngkorNet, WiCam, TC, Camnet, ao amin'ny aterineto sy Camintel mbq hisaorana azy ireo amin'ny “fiaraha-miasany” tamin'ny fanakanana ny fidirana tamin'ireo vohikala maro, aniusan'izany ny KI-Media , Khmerization  sy vohikala mampisongadina ny asa-tananan'ny mpanao sary mahatsikaiky mikasika ny politika ataon'i Sacrava .
Nanome fanambarana mampisavoritakany governemanta tamin'ny firaiketan'ity  taratasy ity. Manohy mitompo teny ny Minisitra fa tsy ataon'ny governemanta izany fanivanana vohikala izany. Ireto misy ampahany sasany tamin'ilay taratasy mampihady hevitra:
Ny Fivondronana Kambodziana ho an'ny Fandrosoanasy ny Fiarovana ny Zon'olombelona (LICADHO) dia manameloka  ilay fanakanana vohikala marobe voatatitra
Araka ny tatitry ny media, ny fampiasana aterineto  tany Kambodia dia niakatra 500 isan-jato  tamin'ny taona lasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/28/13738/
 anivana ireo vohikala: http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011021746858/National-news/ki-media-block-confusion.html
 dia manameloka: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=238
 miahiahy : http://ki-media.blogspot.com/2011/02/cambodia-orders-popular-blog-blocked.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/bmaW+(KI+Media)
 ny fampiasana aterineto: http://khmerweekly.com/2011/02/25/social-media-here-more-social-than-political-researcher/
 500 isan-jato: http://twitter.com/ChrisInCambo/status/37824916401168384